‘बोली चिप्लिएको हो’ कसरी भने प्रधानमन्त्रीले ? « Kathmandu Television HD
‘बोली चिप्लिएको हो’ कसरी भने प्रधानमन्त्रीले ?
काठमाडौँ । भेनेजुएला प्रकरणमा नेकपा अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो विज्ञप्ती सार्थक रहेकोमा जोड दिएका छन् । उनले आफ्नो विज्ञप्तीमा स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रमा बाह्य हस्तक्षेप नहोस् भन्ने आसय रहेको र यसरी जारी गरेको विज्ञप्तीमा आफु अडिग रहेकोमा जोड दिएका हुन् ।
प्रचण्डको विज्ञप्तीलाई लिएर असन्तुष्ट देखिएका अमेरिकी राजदूतसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विज्ञप्तीमा प्रचण्डको शब्द चिप्लिएको भन्दै सकारात्कतातिर मोडेका थिए । तर अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसको खण्डन गर्दै आफुले जारी गरेको विज्ञप्ती कै स्पिरिटमा परराष्ट्रबाट पनि वक्तव्य जारी थियो भन्दै आफ्नो वक्तव्यमा बोली नचिप्लिएको आशय दिएका हुन् ।
उनले भने ‘मंगलबारको सचिवालय बैठलेसमेत हस्तक्षेपको विरोधमा वक्तव्य जारी गरिसकेको छ । यसमा व्यक्तिको भनाइले केही अर्थ राख्दैन,’ । बिहीवार बिहान भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् ।